निर्मला पन्त हत्याकाण्ड संग सम्बन्धित समाचारहरु – सुदुरन्युज डट कम - SudurNewsNP
साउन १० गते विहिबार बिहान ११ बजे साथीको घर हिडेकी वर्ष १३ की निर्मला पन्त को शब साउन १२ गते विहान ८ बजे भीनपा १८ स्थित पत्थरपुरको उखू बारीमा फेला परेको थियो।
भीमदत्त नगर पालिका – २ सरस्वती टोल, उल्टाखाम बस्दै आएकी पन्त कक्षा ९ मा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरक्त थिइन ।
प्रारम्भीक अनुसन्धानमा बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएको देखिन आएको प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काले बताए ।
द्वारा : सुदुर न्युज April 23, 2019
कञ्चनपुर,वैशाख १० गते । बलत्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकि १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै मगंलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा २ घण्टा अधिकारकर्मीहरुले धर्ना दिएका छन। अधिकारकर्मीहरुले संघर्ष…
काठमाडौं, मंसिर 22 — निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दुई अभियुक्तले अपराध स्वीकार गरेका छन् । सामूहिक बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरेको उनीहरूले सोधपुछमा बताएका छन् । प्रदीप रावल…
कञ्चनपुर, मंसिर 22— निर्मला पन्त हत्याको चार महिनापछि प्रहरीले उनकै छिमेकी वडाका दुई युयकमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिका १८ का प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा…
निर्मला हत्या प्रकरणः शंकास्पद भनिएका ४ जनाको पनि डीएनए मिलेन
द्वारा : सुदुर न्युज November 16, 2018
काठमाडौं , कार्तिक ३०। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा शंकास्पद मानिएका ४ जनाको डीएनए रिपोर्ट पनि ‘नेगेटिभ’ आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले शंकास्पद ४…
निर्मला हत्या प्रकरण: कहाँ अल्झियो प्रहरी ? अबको अनुसन्धान कता ?
द्वारा : सुदुर न्युज November 3, 2018
महेन्द्रनगर , कार्तिक १७, २०७५ । निर्मला पन्तको हत्या भएको एक सय एक दिन समेत बितिसकेको छ । बलात्कारपछि हत्या भएको यति लामो बित्दासमेत घटनामा संलग्न अपराधीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको…
महेन्द्रनगर , कार्तिक १२, २०७५। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरिएको छ । निर्मलाका परिवार, अधिकारकर्मी लगायतले आज महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गरेका हुन्…